Isebenzisa i-Xbox 360 yakho amandla amangakanani? - Isiko Lopop
Isebenzisa i-Xbox 360 yakho amandla amangakanani?
Ibiza malini i-Xbox 360 yakho ukusebenzisa noma kunjalo? Ingabe omunye wakho obalulekile, ohlala naye, noma abazali bakutshela ukuthi usebenzisa ibhajethi yamandla? Qhubeka ufunde ukuze ufunde kahle ukuthi usebenzisa ugesi ongakanani, nokuthi iziphi izakhi ezidla amandla amaningi. Njengebhonasi, sifaka amanye amaqiniso athakazelisayo ongawasebenzisa ukujabulisa abangane bakho.
NgoKhisimusi, unkosikazi wami omangalisayo wanginikeza iKill-A-Watt - ithuluzi elincane owalixhuma odongeni ukukala ukugeleza kwensimbi exhunywe kuyo. I-Wattage isilinganiso samanani womsebenzi owenziwa ngesikhathi esinqunyiwe, ngokungafani nesikhathi esithile. Isibonelo, sithi izinto ezifana nokuthi, lelo bhalbhu elisebenzisa amandla angama-watts angama-60, okusho ukuthi lisebenzisa ama-joules angama-60 ngomzuzwana. Bona ngezansi ukuthola incazelo esheshayo yokuthi yini i-joule.
spongebob mid life crustacean isiqephu esigcwele
Yini i-joule? I-joule iyunithi ejwayelekile yamandla. I-joule eyodwa imayelana nenani lamandla adingekayo ukuphakamisa ikhilogremu elilodwa (2.2 amakhilogremu) amasentimitha ayi-10 (3.9 amayintshi) phezulu phezulu ebusweni bomhlaba.
Ngakho-ke, i-Xbox 360 isebenzisa amandla amangakanani? Isebenzisa amandla angaba namandla amathathu. Nayi ishadi elizokukhombisa ukuthambisa ngemodi ehlukile yesimo sokusebenza:
Ngokwengeziwe, ukusetshenziswa kwamandla kweminye imingcele ejwayelekile ye-Xbox 360 kuboniswa eshadini elingezansi. Faka lawa manani ezifundazweni ezingenhla ukuze uthole ukusetshenziswa okuphelele, njengokufanele. Qaphela ukuthi i-Y-axis lapha ihluka ngama-watts amane kuphela:
Njengoba ukwazi ukubona, imingcele yesisindo ayisindi. Inani lezilawuli ezingenantambo ezixhunywe nganoma isiphi isikhathi ngokumangazayo alinamthelela, mhlawumbe ngoba umsakazo oduduzayo oxhumana nawo uhlala uvuliwe noma kunjalo.
Iningi lama-breaker wesekethe omndeni noma amakamelo okuhlala alinganiselwa kuma-amps ayi-15 wamanje (hlola okwakho ngaphambi kokwenza noma yini ukuqubuka) - okungaphezulu kwalokhu kusekethe futhi ikhefu lizokhubeka. Ukukusiza ukuthi uthole ukuthi zingaki izinduduzo ongazibeka kusekethe eyodwa egumbini lakho elingaphansi - kumama wawo wonke amaqembu we-LAN, yithi - yazi ukuthi i-Xbox 360 idonsa ama-amps angu-2.42 lapho iqhuba umdlalo ofanele. Leyo yinombolo ethokozisayo, kepha ayitsheli yonke indaba. Kuthiwani ngama-TV nezipika ezisetshenziselwa ukududuza?
Nali itafula elibonisa ukudonsa nokudonsa kwamanje kwe-TV yami (incazelo endala, ejwayelekile engu-25 RCA), iphrojektha yami (i-HP xb31 ephezulu), ne-amplifier yami (i-Sony 5.1 STR-DE697), kokubili kokubekwe eceleni (off) nangezindlela. Imayela lakho ngokuqinisekile lizohluka ngokuya ngemishini yakho, kepha ngiyethemba lezi zibalo zingakunika umbono:
Vuliwe Hlala ULINDILE Vuliwe Hlala ULINDILE
I-TV 113 8 1.54 0.17
Iphrojektha 186 5 1.46 0.09
Isikhulisi 51 0.25 0.57 < 0.01
Ngokudidayo, ama-360 adonsa cishe njengamanje okuphindwe kabili (futhi, kulinganiswa ngama-amps) kunalokho akusebenzisayo (njengoba kukalwa kuma-watts). Lokhu kungaba nomphumela wokukusunduza usondele ekubeni nohambo lwe-breaker circuit, noma ngabe awudli ngempela amandla amaningi. Lokhu kwenzeka ngenxa yamanye ama-shenanigans afaka amandla agcinwa kuma-inductors ngendlela yamagnetic field (wama-motors, njll.), Nezinye izinto. Lokhu kwamanje kuyadonselwa, kugcinwe, futhi kudedelwe kubuyiselwe esifundeni - ngakho-ke udonsa amandla amaningi, kepha usebenzisa enye yawo kuphela.
Ngakho-ke; noma i-Xbox 360 isebenzisa ama-watts angu-170 kuphela ngesikhathi sesikhathi sokudlala, umdwebo wayo ongu-2.42 amps. I-TV yami, i-amplifier, ne-360 konke ndawonye kudweba ngaphezu kwama-amps angu-4.5, futhi ngokuvamile ungaba nokusetha okubili kuphela kusekethe efanayo engu-15-amp ngaphandle kokuphuka kwesifunda. Qaphela ukusebenzisa amasethaphu amathathu - ngalinye lalawa madivayisi lidonsa njengamanje uma liqala ukuvula, futhi ungaqiniseka ngokuphoqa ikhefu uma onke evule ngasikhathi sinye.
Mhlawumbe okubaluleke kakhulu, ukuthi ingakanani amandla asetshenziswayo phakathi nehora. Lokhu kusitshela ukuthi singawasebenzisa isikhathi esingakanani ama-360 ethu ku-generator, noma mhlawumbe ukuhamba ngezinyawo kakhudlwana, kungabiza malini ukwenza lokho.
Iyunithi ejwayelekile yamandla kagesi yihora le-kilowatt (kW-h). Ihora le-kilowatt linani lamandla adingekayo ukusebenzisa ama-light-watt ayi-100 watt ihora. Leli yunithi elizwakala ngokungafanele yilokho amakhaya ase-USA (okungenani) akhokhiselwa khona ukusetshenziswa kukagesi. Lapha eCorvallis Oregon, e-USA, ihora elilodwa lekhilowathi kagesi libiza cishe u-7.13 cents USD. Lokho kushibhile kakhulu ngeyunithi ngayinye, kepha mina nomkami sisebenzise ama-1501 kW-hs ngenyanga eyedlule ngamandla angaphezulu kwamadola ayi-100. Ihora elilodwa le-kilowatt lilingana nama-joule ayisigidi esingu-3.6, noma ama-mega joule angu-3.6.
Leli thebula elilandelayo libala ukuthi mangaki ama-kW-h asetshenziswa yidivayisi ngayinye njengoba kuchaziwe ngenhla, futhi likhombisa nokusetshenziswa kwenhlanganisela ethile ejwayelekile:
iresiphi ye-lofthouse ushukela ngaphandle kokhilimu omuncu
I-Xbox 360, eceleni < .01
I-Xbox 360, ibuka i-DVD .eshumi nanye
I-Xbox 360, kuDeshibhodi .14
I-Xbox 360, R6: Vegas .17
Isikhulisi, Vuliwe .05
I-Xbox 360 RS: V, TV, amplifier, Wireless Adapter, HD .3
Umshini Wokuwasha, umthwalo ophakathi .26
Ngakho-ke, ihora elilodwa le-Rainbow Six: I-Vegas, ngokusebenzisa iprojektha yami, i-amplifier, ne-Xbox 360 ingibiza ngama-0.3 kW-h ama-7.13 amasenti ukulingana namasenti angu-2.139. Yilokho kuphela! Uma une-TV enkulu kuneyami, mhlawumbe idonsa amandla amaningi kunama-360 wakho. I-PC yakho impela iyakwenza.
Ngokusobala nokho, izindleko zamandla akho ngehora ngalinye le-kilowatt zizohluka. Isibonelo, omunye umfundi wePlanethi Xbox 360 ungitshele ukuthi ama-kW-hs akhe abiza amasenti ayi-10 eKentucky, kanti omunye ohlala eYurophu ucaphune izindleko ezilinganiselwa kumasenti ayi-11 noma ayi-12 nge-kW-h ngayinye. Ngibonile izindleko eTennessee ngamasenti angu-6.46 nge-kW-h ngayinye. Ukuthola izindleko zakho (uma zingafakwanga ohlwini lwebhili yakho yamandla), ungathatha izindleko eziphelele zensizakalo yakho yamandla (ngaphandle kwezimali ezengeziwe, ezingefani) bese ulihlukanisa ngenombolo yama-kW-hs owasebenzisile. Lokho kuzokutshela ukuthi iyunithi ngalinye libiza malini.
Ngisho nokugcwalisa kabusha ihedsethi entsha engenantambo kushibhile - kuthatha amahora angaba mane kuphela, futhi kudla amandla angekho nhlobo. Kuthatha ngaphansi kuka-0.01 kW-h ukushaja ngokuphelele, futhi kudle amandla angaphansi kweyodwa wamandla ngenkathi ikwenza.
Ngakho-ke, kuthiwani ngokushisa? Ngizwile abantu bethi i-Xbox 360 ingafudumeza indlu yabo yonke. Yebo, kunika kuphela amandla angama-50% ngaphezulu kune-TV yami, hhayi ama-500% ngaphezulu. Kungabonakala njengokunye okuningi, kepha, ngoba ukushisa okwenziwa yi-360 akusakazeki kakhulu endaweni enkulu, njenge-TV, futhi iningi lokushisa likhishwa ngomlandeli omncane onomsindo - ngamanye amagama, kugxilwe endaweni eyodwa encane. Ngakho-ke ungakholelwa i-hype.
Ekugcineni, umbono othile: Umshini Wokuwasha. Tshela umama wakho ukuthi ayeke ukuwasha izingubo - usebenzisa wonke amandla akhe! Ngokuzimisela, umshini wami wokuwasha udonsa ama-amps ayi-10.5 ngenkathi usebenza, futhi usebenzisa .26 KWH kuwo wonke umthwalo ophakathi ohlala cishe isigamu sehora. Ngezinye izikhathi ishaya ama-watts angama-690 - ngokusobala, lolu hlobo lwedivayisi luvame ukuhlala kusekethe lwalo. Ngolunye usuku singaba nezinduduzo ezisebenzisa lolu hlobo lwamandla, futhi mina kufanele ngithi ngilulindele lolo suku!
vanilla ikhekhe zokupheka nge baking soda
ibhokisi elimhlophe ikhekhe ukuxuba iresiphi imibono
iresiphi ye-strawberry cake emanzi kusuka ekuqaleni
indlela yokwenza amakhekhe ebhokisi anambitheke okwenziwe ekhaya